Voafonja vehivavy Antanimora (2017)
Fitoriana an-kira sy tantara an-tsehatra no nasehon’ireo voafonja vehivavy ao Antanimora
Mitohy ny fiarahamiasan’ny Feon’ny Filazantsara amin’ny Fonjan’Antanimora amin’ny Fitoriana ny Filazantsara. Tahaka ny isan-taona dia nikarakara fitoriana an-kira sy tantara an-tsehatra ireo voafonja vehivavy ao Antanimora ny 13 Desambra 2016 ka ny tantaran’i Samoela mpaminany no novelominy tamin’izany. Miisa 30 ireo voafonja vehivavy nanatanteraka izany ka ireo voafonja vehivavy rehetra ao Antanimora sy ny mpandraharahan’ny fonja no nasaina nanatrika izany. Tena fotoana fifaliana sy nahafahana nampita ny hafatry ny Filazantsara tokoa izany. Tamin’izany koa no nanararaotana nizarana vary 100kg ho an’ireo voafonja sy vatomamy ho an’ireo izay nadray anjara tamin’y fampisehoana sy fitoriana ary nahafahana nanentana momba ny Fianarana Soratra Masina Ifandraisana karakarain’ny Feon’ny Filazantsara.
Asa Fitoriana ny Filazantsara eny amin’ny Fonja (Aprily 2016)
Fanamafisana ny fiaraha-miasan’ireo mpiara-miasa an-tsitrapo "Volontaires FF"
Niisa valo ireo mpiara-miasa an-tsitrapo teto amin’ny Feon’ny Filazantsara (FF) niasa teny anivon’ny Fonjaben’Antanimora saingy tsy afaka nanohy ny asa intsony ny telo. Misy hatrany anefa ireo maniry ny hizara ny fitiavan’i Jesosy Kristy amin’ireo voafonja, izay tena ao anatin’ny aizina tokoa. Nanomboka ny volana Aprily 2016 teo dia nahatratra folo ireo mpiara-miasa an-tsitrapo (5 lehilahy, 5 vehivavy) manolon-tena hitory ny Filazantsaran’ny Famonjena amin’ireo voafonja (lehilahy sy vehivavy). Tsiahivina fa indroa isan-kerinandro ny famangiana ataon’izy ireo. Ho fanamafisana ny fifandraisana, ny fifankatiavana ary ny fiaraha-miasa eo amin’ny rehetra ary dia nisy fihaonana izay notarihin’Atoa Rakoto Rabehajaina Louis, Tale Mpisolo toerana amin’izao fotoana izao.
:Fonjaben’ Antanimora (Oktobra 2015)
Mitarika ireo voafonja hibanjina mandrakariva an’i Jesosy Kristy
Raha tsiahivina dia tsy mijanona eo amin’ny fitaizana ny ara-panahin’ireo voafonja lehilahy sy vahivavy eny Antanimora ihany ny asa ataon’ny Feon’ny Filazantsara (FF) eny an-toerana. Ankoatra ny Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana (FSMI) izay omena azy ireo, ny famangiana isan-kerinandro ataon’ireo mpiara-miasa an-tsitrapon’ny FF mitondra ny Tenin’Andriamanitra sy fampaherezana mantsy dia tsy adino koa ny ara-nofo: fanomezana sakafo izay iarahana amin’ireo Fikambanana hafa. Efa ho telo taona ihany koa izao no nivelatra tamin’ny lafiny fifaninanana ara-panatanjahan-tena toy ny baolina kitra ny asan’ny FF eny amin’io Fonja io. Ny fikendrena anefa dia ny hampitodika mandrakariva ireo voafonja amin’i Jesosy Kristy Tompo. Ho an’ity taona ity àry dia nandritra ny volana Oktobra no nanatanterahana ny fifaninanana teo amin’ireo voafonja lehilahy. Nisy ekipa valo ireo mpandray anjara tamin’izany ka ny Alatsinainy 26 Oktobra 2015 teo no nanaovana ny famaranana. Nandritra ny dingana am-pahefa-dàlana, manasa-dàlana ary ny famaranana dia nisy hatrany fanentanana ireo mpanatrika marobe izay nahatratra teo amin’ny 2000 ny hirosoan’izy ireo amin’ny fianarana ny Tenin’Andriamanitra izay atolotry ny FF. Faly tokoa ireo voafonja fa tsy vitan’ny nahazo fampaherezana ara-panahy ihany fa dia nahazo fialam-boly izay tena ilain’izy ireo koa.
Voafonja vehivavy (Antanimora) (Novambra 2014)
Fifaninanana Rindran-kira ara-pilazantsara «Mihobia ho an’i Jesosy Kristy”
Ireo vehivavy voafonja eny amin’ny Fonjaben’Antanimora no nahazo ny anjara fifaliana nentin’ny Feon’ny Filazantsara ho amin’izao ankatoky ny fankalazana ny krismasy izao; raha toa ka ny voafonja lehilahy no nahazo izany hatrizay tamin’ny alalan’ny fifaninanana ara-panatanjahantena. Fifaninanana rindran-kira ara-pilazantsara nampitondraina ny lohateny hoe: “MIHOBIA 2014” no natolotra ho azy ireo, ka natomboka ny 04/11/14 ary nifarana ny 25/11/14 lasa teo izany. Nozaraina ho “chorale” dimy (avy amin’ireo efi-trano dimy) izy ireo ka nahatratra 10 ny mpandray anjara mandrafitra ny ekipa iray. Fifaliana sy fiderana an’i Jesosy Kristy, Tompo sy Mpamonjy no hita taratra tamin’ny seho rehetra, ary nasehon’izy ireo tamin’ny feo manga sy fihetsika mahafinaritra ary fitafiana kanto nisalorany izany. Marihina fa dia nisolo isaky ny fampisehoana ny fanamiana nanaovan’ny mpandray anjara. Tamin’ny famaranana dia notolorana loka avokoa ireo mpandray anjara rehetra, na dia ireo tsy tafakatra tamin’ny dingana famaranana aza. Hita taratra tokoa ny fifalian’ny rehetra satria tsy nisy ny diso anjara tamin’izay nomanina ho azy. Hoy izy ireo: tsy maniry taona maro hijanona eto intsony izahay fa raha sanatria ka mbola eto dia maniry ny hitohizan’ny hetsika toy izao hatrany. “Voninahitra any amin’ny avo indrindra ho an’Andriamanitra! Ary fiadanana ho ety ambonin’ny tany amin’ny olona ankasitrahany” (Lioka 2:14)
Asa fitoriana eny amin’ny Fonjaben’Antanimora (Oktobra 2014)
Tsy misy didy hafa lehibe noho ny “FITIAVANA”
Nanomboka ny taona 2013 dia nivelatra tamin’ny lafiny fifaninanana ara-panatanjahan-tena (baolina kitra) ny fiaraha-miasan’ny Feon’ny Filazantsara (FF) sy ny eny amin’ny Fonjaben’Antanimora. Teo aloha dia fotoam-bavaka fohy sy toriteny, fanentanana ireo voafonja hianatra sy handalina ny Tenin’Andriamanitra amin’ny alalan’ny Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana (FSMI) ary fanomezana sakafo izay iarahana amin’ireo Fikambanana hafa miasa eny amin’ny Fonja no niandraiketan’ny FF. Tanteraka soa aman-tsara izany fifaninanana lalao baolina kitra izany ho an’ny taona 2014. Efa nanomboka ny volana Septembra izany ary ny dingana famaranana dia notontosaina ny Alarobia 15 Oktobra 2014. Nanatrika io fotoam-pamaranana io moa Atoa Talen’ny FF Andrianasolo Jaona sy ny tompon’andraikitry ny programa eto amin’ny FF Atoa Rakoto Rabehajaina Louis, niaraka tamin’ireo “volontaires FF” eny amin’ny Fonja. Ho fampaherezana ireo voafonja dia nisy ny Tenin’Andriamanitra izay nentin’Atoa Tale nandritry io fotoana famaranana io. Izany dia nalaina tao amin’ny Marka 12:28-34. Ny hafatra nampitaina moa dia ny hoe: tsy misy didy hafa lehibe noho ny fitiavana an’Andriamanitra sy ny fitiavana ny namana. Nomena "Fanion" misy ny sary famantarana ny FF ny Ekipa nandresy tamin’ny lalao famaranana ary nozaraina vary iray kilao avy isan’olona ny voafonja rehetra izay nandray anjara tamin’izao fifaninanana lalao baolina kitra izao. Nahatratra valopolo mahery (mpilalao sy mpitsara ary mpitantara) ny isan’izy ireo. Testamenta vaovao miisa 20 koa no natolotra mba hovakian’ireo mpianatra manaraka ny FSMI. Marihana fa nandritra ireo lalao fifanitsanana rehetra dia naranty tsy tapaka ny "banderole" mampahafantatra ny FMSI ary nisy hatrany koa ny fanentanana ireo voafonja marobe mpijery lalao mba hirosoan’izy ireo handalina ny Tenin’Andriamanitra, ilay Teny mamelona sy manafaka. Antenaina fa hitombo betsaka hatrany ny isan’ireo mpianatra vokatr’izao hetsika sy fanentanana izao. “...tao an-tranomaizina Aho, dia novangianareo” Matio 25:36b
Asa fitoriana eny amin’ny fonja (Desambra 2013)
“…ny zavatra rehetra dia miara-miasa hahasoa izay tia an’Andriamanitra” Romana 8:28
Ny volana Oktobra sy Novambra 2013 lasa teo dia nisy fifaninanana ara-panatanjahan-tena baolina kitra nokarakarain’ny FF ho an’ireo voafonja lehilahy. Nisy ekipa valo izy ireo no nandray anjara ka ireo ekipa roa tafakatra tamin’ny dingana famaranana izay notanterahina ny 4 Novambra 2013 dia nahazo loka. Ho an’ireo rehetra nandray anjara dia nahazo vary avokoa. Marihina fa nandritra ireo lalao fifanitsanana rehetra dia nisy hatrany fanentanana ireo mpanatrika marobe ny hirosoan’izy ireo amin’ny Fianarana ny Tenin’Andriamanitra (FSMI). Antenaina fa hitombo betsaka ny isan’ireo mpianatra vokatr’izao hetsika sy fanentanana izao.
Asa fitoriana eny amin’ny fonja (Jona 2013)
« …efa nahazo maimaimpoana hianareo, koa manomeza maimaimpoana.» (Matio 10 :8b)
Mpiara-miasa an-tsitrapo valo mianadahy (avy eto amin’ny Foibe FF, FLM ary FJKM) no miandraikitra ny asa Fitoriana eny amin’ny Fonjaben’Antanimora. Mizara telo mazava tsara ny asa iandraiketan’izy ireo eny an-toerana: fotoam-bavaka fohy sy toriteny, ny fanentanana ireo voafonja hianatra sy handalina ny Tenin’Andriamanitra amin’ny alalan’ny Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana (FSMI) atolotry ny FF. Eo koa ny eo amin’ny lafiny ara- tsaina sy ara-batana, toy ny fizarana sakafo izay iarahana amin’ireo Fikambanana hafa, ary fikarakarana fanatanjahantena sy fifaninanan-kira.
3. Ireo hetsika enti-manatanteraka ny tanjona:
a) Ny tena lehibe sy ifotorana dia ny Fitoriana ny Filazantsara amin'ny alalan'ny fanompoam-pivavahana ary ny fampianarana Soratra Masina an-taratasy ifandraisana.
- Ny Fitoriana ny Filazantsara:
Atomboka amin'ny fanompoam-pivavahana eokomenika : hira ara-pilazantsara, Marihina fa mandray anjara mavitrika amin'izany ny voafonja satria isaky ny kartie (indrindra fa ny kartie C sy D) dia misy antoko mpihira manafana ny fotoana.
- Ny fampianarana Soratra Masina an-taratasy ifandraisana :
Natao mba hitarihana ireo voafonja hiara-manaraka ny Fampianarana, ka dia hamaky sy hianatra izay voasoratra ao amin'ny Baiboly.Manana fotoana malalaka tokoa mantsy izy ireo. Ary dia amporisihana izy hazoto hianatra.
Marihina fa isaky ny kartie dia misy voafonja (iray na roa) nanolo-tena hangorona ireo adina ho tsaraina sy hizara ireo lesona vaovao ho an'ireo manaraka ny fampianarana isa-kerinadro.
b) Ireo hetsika hafa
- Manampy ireo fikambanana mpanao asa soa hafa amin'ny fizara ireo zavatra ilaina amin'ny fiainana andavanandro:
* Ho an'ny voafonja rehetra rehefa tonga ny krismasy sy ny fetin'ny fahaleovatena (faha 26 jona)
* Ho an'ireo izay manaraka ny Fampianarana Soratra Masina an-taratasy ifandraisana in-dray mandeha na in-droa isa-taona (vary, savony, siramamy, stylo ...) iandraiketan'ny Feon'ny Filazantsara manokana.
- Fizarana Baiboly isaky ny kartie (Baiboly 35 teo izao no voazara ho an'ireo mpanaraka ny fampianarana.
- Fandefasana horonan-tsary ara-pilazantsara (kartie C sy D)
Ny fampianaran'ny Tenin'Andriamanitra hita ao amin'ny:
- Jeremia 31 : 3 «Fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izany no nampaharetako famindrampo ho anao.»
- Salamo 103 : 8-10 «Mamindrafo sy miantra Jehovah, mahari-po sady be famindrampo. Tsy mandaha-teny mandrakariva Izy, na mitahiry fahatezerana mandrakizay. Tsy mba manao amintsika araka ny fahotantsika Izy, na mamaly antsika araka ny helotsika.»
- Jaona 3: 14-17 «Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao : nomeny ny Zanany lahy Tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny Zanaka ho amin'izao tontolo izao hanameloka izao tontolo izao, fa mba hamonjeny izao tontolo izao.»
No manoritra mazava ny tanjona ho tratrarina :
- Miezaka ny hanova ny fitondrantenan'ireo voafonja. Fomba roa no enti-manatanteraka izany :
a.	Am-bava : fitoriana ny Filazantsara amin'ny alalan'ny fanompoam-pivavahana.
b.	An-tsoratra : Fitoriana ny Filazantsara amin'ny alalan'ny fampianarana Soratra Masina an-taratasy ifandraisana izay hanamafy ny finoany an'i Jesosy Kristy.
- Mitarika ireo voafonja hahatsapa ny fahadisoany, hanenina ny amin'izany ary mba tsy hamerina intsony.
Izany hoe, manao izay hahazon'Andriamanitra manova ny voafonja, ka hahatonga azy ho olom-baovao, manana fiainam-baovao ao amin'i Jesosy Kristy, akaiky kokoa an'Andriamanitra na amin'ny fiteny na amin'ny fitondrantena (mandritra ny maha-voafonja azy, eny na efa tafavoaka ny fonja aza izy).
Tao amin'ny fonjan'Antanimora no nanomboka ity sehatr'asa ity ny Feon'ny Filazantsara tamin'ny taona 2002. Ny taona 2011, dia nitatra hatrany amin'ny fonjan'i Tsiafahy izany.
Ianao no mpitsidika faha 48508
149 ny mpianatra eto amin'ny tranokala feon'ny filazantsara ankehitriny.
Miisa 529 ny mpikambana ankehitriny.